सुशान्तलाइ बिर्सिन सकिनन् अंकिताले, आखिर सार्वजनिक भएरै छोडे घरमा सम्हालेर राखेका यी कुरा ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/सुशान्तलाइ बिर्सिन सकिनन् अंकिताले, आखिर सार्वजनिक भएरै छोडे घरमा सम्हालेर राखेका यी कुरा !
सुशान्तको निधनसँगै यतिबेला उनको जिन्दगीका विभिन्न पाटाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्। जसमा उनी विहेको तयारीमा रहेको समाचार पनि यस अघि नै आइसैको छ । नोभेम्वरमा विहे गर्नेगरी उनको परिवारले तयारी गरिरहेको थियो। तर, उनले ५ महिना अघि नै संसारलाई अलविदा भने।उनको निधन पछि बलिउडमा बिभिन्न समाचार आइरहेका छन् जसले उनका बारेमा थाहा नभएका कुराहरु अहिले थाहा हुदै छन् । उनको निधन पछि बलिउडमा तहल्का नै मच्चिएको छ धेरै राम्रा कलाकारहरु यस घटनाको कारण हुन् भन्दै दोषारोपण भैरहेको छ ।
नेपालका अनलाइनमा होस् या बिदेशका अनलाइन मिडियाहरु हुन् अहिले दिनहुँ उनको बारेमा समाचारहरु छापिएका छन् । उनका बारेमा दिनप्रति दिन अनेक थरिका खुलासा र हुँदै गएका छन् भने कतिले त देहत्याग गरेका छन् त्यसैले पनि उनलाई जोडिएर समाचारहरु आइरहेका छन् ।सुशान्तको निधन पछि उनको प्रेमको बारेमा पनि धेरै चर्चा चलेको छ । उनकी अहिले कि प्रेमिका हुन् या पुर्वप्रेमकाहरु नै किन नहुन अहिले सबैले सम्झिरहेका छन् । यसै क्रममा सुशान्तको प्रेमिका अंकितालाइ त झन् धेरैले फलो गरिरहेका छन् सुशान्तको निधन पछि ।
सुशान्तको अचानक यस्तो दुर्घटना भएको खाबर पहिलोपटक हुनले पाउँदा उनले बोल्न नसकेर फोन काटेको पनि समाचार आएका थिए । उनले यो खबर थाहा पाएपछि सुशान्तको परिवारलाइ भेट्न उनि रुँदै पुगेकी थिइन् यसले पनि थाहा हुन्छ कि उनिहरु अलग भए पनि एकार्कालाइ निकै प्रेम गर्थे । उनीहरु आफ्नो जन्मदिनमा पनि एकार्कालाइ शुभकामना दिइनै रहन्थे ।सुशान्त कलाकार अंकिता लोखंडेसँग लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। उनले नेशनल टेलिभिजनमा सबैका सामुन्ने अंकितालाई प्रपोज गरेका थिए। यी दुवै कुनै समय टेलिश्रृखंला ‘पवित्र रिश्ता’मा मानव र अर्चनाको भूमिका निभाउने कलाकार थिए। यहीँबाट प्रेम सुरु भएको थियो।
एक पछि अर्को चलचित्रमा काम गर्दै गएपछि सुशाान्तले अंकितासँग ब्रेकअप गरेका थिए। ब्रेकअपपछि अंकिताको हालत निकै खराब भएको थियो। यस हालतबाट बाहिर निस्कन उनलाई लामो समय लागेको थियो। अंकिता ब्रेकअप पछि बाहिरी दुनियाँ तथा अभिनय छोडेर एक्ली भएकी थिइन्।यसरी सम्बन्ध तोड्दा अनेकौं खबरहरु आएपनि दुवैले यसबारे कुनैपनि प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्। तर सम्बन्ध टु’टेपछि अंकितालाई भने ठूलो झड्का लागेको कुरा कसैबाट लुकेको थिएन ।किनकि, सुशान्त बलिउड फिल्ममा एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै गए भने उता अंकिताले अभिनयको दुनियाबाट आफुलाई राखिन् ।
अंकितले पछि बलिउडमा डेब्यू गरेपछि र प्रेम सम्बन्धबारे एक अन्तरवार्ताका क्रममा खुलेर बोलेकी थिइन् । अंकिताले ब्रेकअपले उनको करियरमा कुनै असर नपरेको तर त्यसबेला काम र प्रेमलाई एकसाथ सम्हाल्न नसकेको बताएकी थिइन् ।उनले भनिन्, ‘म सुशान्तको साथमा रहेर आफैलाई माया गर्न भुलिसकेकी थिएँ । मैले आफैंलाई बिर्सिएर ऊसँगको सम्बन्धमा बाँचिरहेकी थिएँ । तर अहिले मैले सबैथोक पाइसकेँ । मैले आफैलाई माया गर्न सिकिसकेँ ।’ उनले अहिले आफूले कहाँ, कसलाई कति महत्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको र हरेक कुरालाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने थाहा भएको बताएकी छिन् ।
सुशान्तको निधन पछि उनीहरुसँगै बसेका निर्देशक संदिप सिंहले अंकिताको लागि भाबुक पोष्ट गरेका छन् । अंकिताले एक व्यापारीसँग इन्गेन्मेन्ट गरेको तस्विर बाहिरिए पनि उनले आफ्नो घरबाट नम्बर प्लेट हटाएकी छैनन् ।उनले प्यारी अंकिता भन्दै उनीहरु ३ जना एउटै घरमा बस्दाको समझनाहरुलाई स्मरण गरेका छन् । अंकिताले एउटा आमा, साथी, जीबनसाथी, सहयोगीको भुमिका निभाएको उनले उल्लेख गरेका छन् । अंकिताले जसरी सम्हालेकी थिइन् त्यसरी उस्लाई अरु कसैले पनि सम्हाल्न नसक्ने उनले बताएका छन् ।
सुशान्तले ३ दिन अगाडि स्टाफलाई तलव दिँदै यस्तो भनेका रहेछन…